ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ လူစားလဲမှု ၅ကြိမ်ကို ပြန်သုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ဆောက်ဂိတ် – MySport Myanmar
ပရီးမီးယားလိဂ်ဟာ လူစားလဲမှု ၅ကြိမ်ကို ပြန်သုံးသင့်တယ်လို့ ဆိုခဲ့တဲ့ ဆောက်ဂိတ်
အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင် နည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ကတော့ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါ ဖြစ်နေချိန်မှာ ကစားသမားတွေအနေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဒဏ်ရာ ရရှိမှာ ကို စိုးရိမ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ရဲ့ စည်းမျဉ်းဖြစ်တဲ့ တစ်ပွဲကို ကစားသမား ၃ ဦးသာ လူစားလဲခွင့် ကန့်သတ်ချက်ကို ပြန်လည် စဉ်းစားသင့်နေပြီလို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် ဟာ ဒီနှစ် ဆောင်းရာသီ မှာ အားလပ်ရက် မရရှိတဲ့ အပေါ်ကိုလည်း မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသလို လီဗာပူးနည်းပြ ဂျာဂျန်ကလော့ပ် နဲ့ မန်စီးတီး နည်းပြ ပက်ပ်ဂွာဒီယိုလာ တို့ကလည်း ကစားသမား ၅ ဦးအထိ လူစားလဲခြင်းကို ဘာလို့ ကန့်သတ်ထားရတာလဲ ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
လီဗာပူး၊ မန်စီးတီးနဲ့ အခြားသော ပရီးမီးယားလိဂ် နည်းပြအများစုက အဆိုပါ စည်းမျဉ်းကို အခြားသော ဥရောပလိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာလို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ ဆန္ဒရှိနေကာ ဒီရာသီမှာ အကောင်အထည် ဖော်လိုနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အသင်း အငယ်တွေ ကတော့ အဆိုပါ စည်းမျဉ်းဟာ သူတို့အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ကစားရာမှာ အားနည်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုပြီး တွေးနေကြပါတယ်။ ဒီရာသီ ဆောက်ဂိတ်ရဲ့ အင်္ဂလန် အသင်းမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာ ရရှိထားတဲ့ ကစားသမားများလည်း ရှိသလို ကိုဗစ်နဲ့ စပ်ဆက်နေတဲ့ ကစားသမားတွေပါ ရှိနေတာကြောင့် ဆောက်ဂိတ် အနေနဲ့ လာမယ့် ဇွန်လမှာ ကစားမယ့် ဥရောပချန်ပီယံရှစ်ပွဲစဥ်‌ တွေအတွက် သူရွေးချယ်ထားတဲ့ လူစာရင်း အပေါ်မှာပါ အဆိုပါ ပြဿနာတွေ သက်ရောက်လာမာကို စိုးရိမ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ ဘယ်လ်ဂျီယံ နဲ့ ပွဲစဉ်မှာ ၂ ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့သလို ဘန်ချီဝဲလ် နဲ့ ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန် တို့ကလည်း အသေးစားဒဏ်ရာပြဿနာ အသီးသီး ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘန်ချီဝဲလ် ရဲ့ ဒဏ်ရာက သိပ်မပြင်းတာကြောင့် အသင်းမှာ ဆက်ကစားနိုင်ပေမယ့် ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆန်ကတော့ အသင်းကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။
နည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ကတော့ လူစားလဲခွင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခုလို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ “ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ပွဲမှာ ၅ ဦးအထိ လူစားလဲခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီပွဲမှာ ၄ ယောက် လဲခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလပ်အသင်း တွေမှာကျ အဲ့ဒီလို ရွေးချယ်ခွင့် အခွင့်အရေးမရှိပါဘူး။ အဲ့ဒီ စည်းမျဉ်းကို ပြောင်းလဲဖို့ ဘာလို့ ကြာနေရတာလဲ ? ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ ပွဲမှာ ဒဏ်ရာပြဿနာ အသေးအမွှားပဲ ရခဲ့ကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲ ? စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ရောက်တဲ့အထိ ကျွန်တော်တို့ စောင့်ရအုန်းမှာလား ? ကလပ်အသင်း နည်းပြတွေအပေါ် မျှတစွာ ဆက်ဆံဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့ ကစားသမားတွေက သူတို့ အတွက် ပထမ ဦးစားပေးပဲ။ ကစားသမားတွေ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင် ကစားတာပဲ သူတို့ မြင်ချင်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို လုပ်စရာရှိတာက အတူတကွ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ကြဖို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကစားသမားတွေက အရင်အပတ် ကလောက် ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာ မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကစားသမားတွေ အနေနဲ့ ပြန်လည်ကြံ့ခိုင်ဖို့ အချိန် လုံလုံလောက်လောက် မရခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ခန်းတောင် ကောင်းကောင်းဆင်းချိန် မရရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါက ရေရှည်အတွက် စိတ်ပူစရာပါပဲ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်မရှိလို့ပါ။ တစ်ခုခုတော့ ပေးဆပ်ရပါလိမ့်မယ် ” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
MySport Myanmar2020-11-17T19:04:16+06:30November 17th, 2020|Football, Premier League|